မေ 10, 2017 | အထူးပြောစရာမရှိ | ကလေးများ, အဝတ်အစား, အဝတ်အစား, အဝတ်အစား, အဝတ်အစား, tutorials, အမြိုးသမီးမြား
ပုံတွေကိုပုံစံကို download အတွက်ရရှိနိုင်ပါ. လှမ်း 1 Begin by laying BACK2RIGHT SIDES together with BACK SKIRT along the waistline. တွယ်အပ်, stitch, trim and finish using an overlocker or zig zag stitch the seam allowance. ဤစီမံကိန်းတစ်လျှောက်လုံး zig-zag ချုပ်သို့မဟုတ်အခြားလမ်းပိုင်းချုပ်သုံးပါ. Also ensure to useaballpoint jersey […]